Teerera kune Zvakakosha pa Twitter neNarratif | Martech Zone
Narratif ichangobva kuburitsa chishandiso chayo zvinoenderana neazvino patekinoroji yekutsvaga kuti iserere kuburikidza nemafungu emhepo enhaurirano dzepaTwitter uye nekupa data rine musoro.
Panzvimbo pekupa yakaoma, yakawandisa dhata nezve manzwiro, huwandu hwesetetsiti, nezvimwe, Narratif povides mhedzisiro yakamisikidzwa uye yakaderedzwa seyakaganhurirwa hurukuro (kana nyaya) nevanokurudzira. Iyo interface iri nyore, nekukurumidza uye zvakanaka yakarongedzwa. Inoita kuti mushandisi aone dhiraidhi yedhaidhi, awane zvinyorwa zvine hunyanzvi uye aone vanokurudzira.
Parizvino iri beta (uye yemahara), chishandiso chiri kushanda pa10% yeiyo Twitter Firehose uye ine svondo rapfuura kukosha kweTwitter data. Heino muenzaniso seti yezvandawana pa #marketingautomation:
Tags: Betatsvaga vanokurudziratsvaga twitter influencershashtag yekutsvagahypermancer.nhoroondonarratif kuteererakutarisana nevanhuTweetTwittertwitter inofamba
Iyo Dhata Inonongedza kune Anoshamisika Super Bowl Commerce Winner